Ifulethi leholide i-Steige, (Schramberg), ifulethi le-C, i-75 sqm, i-balcony, amakamelo okulala angu-2, abantu abangu-4 - I-Airbnb
Ifulethi leholide i-Steige, (Schramberg), ifulethi le-C, i-75 sqm, i-balcony, amakamelo okulala angu-2, abantu abangu-4
Schramberg, Baden-Württemberg, i-Germany
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Theresia - Lohospo
I-C Apartment, 75sqm, balcony, 2 bedrooms, max. 4 people
Ifulethi elihle elinamakamelo ama-3 endlini evamile Yehlathi Elimnyama, efakwe ngokunethezeka ngekhishi elihlukile, indawo yokugeza / yangasese kanye nevulandi phezu kwawo wonke amagumbi angu-3, kubantu abangu-1-5.
Amafulethi amathathu eholide amahle endaweni ethule enegalari noma amagumbi okulala ama-2, abantu abayi-1-5. Okwamanje,
ifakwe ngokunethezeka. Ikhishi elincane, i-cable TV, umsakazo / i-CD, i-WiFi, indawo yokushisa engadini, i-grill, umbhede kanye nesitulo njengoba kuthanda. Izindawo zokudlela nezitolo, igalofu elincane, inkundla yokudlala eseduze. Indawo ekahle yokuqala ukuhlola i-Black Forest.
Ibungazwe ngu-Theresia - Lohospo
Hlola ezinye izinketho ezise- Schramberg namaphethelo